फेसबुक चलाउनुहुन्छ ? जान्नुहोस् यसका रोचक तथ्य – Janaubhar
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, बैशाख २८, २०७५ | 279 Views ||
¨ बिश्वमा डेढ अर्ब मानिस फेसबुक चलाउँछन् । तर यो दुँनियाकै ठूलो सोसल नेटवर्किंग साइटका केही गुह्य तथ्यहरुको बारेमा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । आउनुहोस् यी एक दर्जन तथ्य बारे जानौँ, जो रोचक छन् तर तपाइँलाई पनि अहिलेसम्म थाहा नभएको हुनसक्छः
¨ फेसबुकमा पहिलोपटक जुन अनुहार देखियो त्यो अमेरिकी अभिनेता अल पचिनोको थियो ।
¨ फेसबुकमा एउटा यस्तो फिचर पनि छ जसमा तपाइँले आफ्नो मृत्युपछि आफ्नो अकाउन्ट व्यवस्थापन गर्नका लागि वारेस नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ ।
¨ फेसबुकको स्टाटस बक्समा गएर तपाइँले जुन कुरा टाइप गर्नुहुन्छ त्यो सिधै फेसबुकको सर्भरमा पुग्दछ, चाहे तपाइँले लेखेको कुरा मेट्नु भयो वा पोष्ट गर्नुभएन भने पनि ।
¨ हरेक एक मिनेटमा फेसबुकमा १८ लाख पटक लाइक बटन थिचिन्छ ।
¨ तपाइँलाई लाग्दछ कि फेसबुकमा निकै धेरै फेक अकाउन्ट हुन्छन् । तर फेसबुकमा उति सारो फेक अकाउन्ट भने छैनन् । प्रचलनमा रहेका कूल फेसबुक अकाउन्ट मध्ये ८÷७ प्रतिशत मात्र फेक अर्थात नक्कली रहेका छन् । तर सयमा झण्डै ९ वटा फेसबुक अकाउन्ट नक्कली हुनु पनि सानो कुरा होइन ।
¨ एक अध्ययन अनुसार फेसबुक चलाइसकेपछिको समयमा हरेक एक तिहाई मानिसले आफ्नो जिवनमा सबैभन्दा धेरै असन्तुष्ट महसुस गर्दछ । यस्तो यसकारण हुन्छ की फेसबुकमा धेरैजसो मानिसहरु जिवनमा खुसीहरु भरिएका पोष्टहरु गरिरहेका हुन्छन् । यसले हामीलाई आरिस उत्पन्न गराउँछ र आफैप्रति असन्तुष्टि पैदा गरिदिन्छ ।
¨ यदि तपाइँलाई घरै बसीबसी पैसा कमाउने इच्छा छ भने फेसबुक ह्याक गर्नुहोस् । फेसबुकमा भएको सुरक्षा कमजोरी पत्ता लगाउनेलाई फेसबुकले नै पुरस्कार प्रदान गर्ने गर्दछ । तर यसो भन्दैमा जथाभावी फेसबुक प्रयोगकर्ताका फेसबुक अकाउन्ट ह्याक गर्नु चाहीँ अपराध हुन्छ । स्मरण रहोस फेसबुकमा हरेक दिन ६ लाख पटक ह्याकिंगको प्रयास गरिन्छ ।
¨ मानिसहरुमा फेसबुकप्रतिको लत यति धेरै बढेको छ की एउटा नयाँ रोग नै सिर्जना भएको छ । जसलाई फेसबुक एडिक्सन डिसअर्डर भनिन्छ ।
¨ कहिलेकाहीँ केही समय फेसबुक साइट डाउन हुन्छ वा चल्दैन । यसो हुँदा हरेक मिनेटमा फेसबुकाई २५ हजार डलर घाटा लाग्दछ ।
¨ फेसबुकमा अहिले जुन लाइक बटन चल्तीमा छ त्यसलाई सुरुवातमा अवेसन नाम दिइएको थियो ।
¨ हाल फेसबुकमा ३ करोड मृत मानिसका अकाउन्ट छन् । आउँदो १ सय बर्षमा यो संख्या ५० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
¨ अरु त अरु, फेसबुक कैयन हत्या तथा मृत्युको कारक बन्ने गरेको छ । फेसबुककै कारण विभिन्न अपराधको जन्म हुने गरेको छ । रोचक कुरा त के भने फेसबुकमा आफूलाई अनफ्रेण्ड गरेको निहुँमा समेत मानिसको हत्या हुने गरेको छ ।
Posted in रोचक, समाचार, सूचना/प्रविधि
Prevखुसी,सुखी र सन्तुष्ट कसरी बन्ने ?
Nextजलाशय संरक्षणमा घोराहीको बृहत् योजना